अंशु बनिन मिस नेवा पोखरा | Samacharpati.com
अंशु बनिन मिस नेवा पोखरा प्रकाशित मिति: 2073 चैत्र6आइतबार(March 19, 2017) 7:54 PM बजे Posted by: Samachar Pati
समाचारपाटी, पोखरा, ६ चैत्र । मिस नेवा पोखरा नेपाल संवत ११३७ को उपाधी तेर्सापट्टीका अंशु शाक्यले जितकी छिन् । उनले मिस ट्यालेण्टको बिषयगत उपाधी संगै उपाधी हात पारेकी हुन् । प्रतियोगिताको निर्णायकहरुले सोधेका प्रश्नहरुको उत्कृष्ट जवाफ दिँदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी १७ प्रतिस्पर्धीलाइ पछाडि पार्दै उनले उपाधी जितेकी हुन् ।
उपाधी संगै उनले रु. ४० हजार नगद, सिजि ब्राण्डको ३२ इन्चको एलइडि टिभी तथा गिफ्ट हयाम्परहरु प्राप्त गरिन् । २० बर्षिय मिस नेवा शाक्यलाई मिस नेवा पोखरा नेपाल संवत ११३६ एलिशा जोशीले चाँदीको ताज पहिराइदिएका थिए । नेवा खलः कास्कीको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा रामकृष्ण टोल पोखराकी निकिता लिगल फस्ट रनरअप बनिन् । उनले रु २५ हजार नगद सहित सिजी ब्राण्डको माइक्रो ओभन तथा गिफ्ट हयाम्पर प्राप्त गरिन । चिप्लेढुङ्गाकी प्राथर्ना डङ्गोल बेस्ट पर्सनालिटीको बिषयगत उपाधी सहित सेकेण्ड रनरअप बनिन् । उनले नगद रु. १५ हजार सहित सिजी ब्राण्डको माइक्रो ओभनका साथै गिफ्ट हयाम्परहरु प्राप्त गरिन् ।
कार्यक्रममा निकै रोचक र नौलो किसीमले अन्तिम प्रश्न गरिएको थियो । उनीहरुलाई डोकोमा बच्चा बोकेर हिँडिरहेकी महिलाको तस्विर देखाएर, तस्विरको बिवेचना गर्न लगाईएको थियो । प्रतियोगितामा भ्युवर्स च्वाइस अवार्ड र बेष्ट नेवारी ल्याङ्गवेजको बिषयगत उपाधी मोहोरिया टोलका रसना बुद्धाचार्यले जितिन् । उनले बेष्ट नेवारी ल्याङ्गवेजका लागि रु. ७ हजार तथा भ्युवर्स च्वाइसका लागि रु. ५ हजार सहित बिभिन्न गिफ्ट हयाम्पर प्राप्त गरिन् । नदिपुरका ज्यास्मिन श्रेष्ठले बेस्ट स्माइल, बागबजारका श्रद्धा श्रेष्ठले मोस्ट फ्रेण्ड्ली तथा नयाबजारका सिम्रन श्रेष्ठले मिस फोटोजेनिकको बिषयगत उपाधी जिते । उनीहरुले रु ५ हजार तथा बिभिन्न गिफ्ट हयाम्पर प्राप्त गरे ।
प्रतिस्पर्धामा नयाबजारका सरिष्मा उदास, गणेशटोलका सुमित्रा श्रेष्ठ, नदिपुरका ज्यास्मिन श्रेष्ठ, मोहोरियाटोलका रसना बुद्धाचार्य, बगरका आयुष्मा श्रेष्ठ, दमौलीका लक्ष्मी श्रेष्ठ, नयाबजारका सिम्रन श्रेष्ठ, तेर्सापट्टीका अंशु शाक्य, रामकृष्णटोलका निकिता लिगल, शिसुवाका सुमन श्रेष्ठ, बागबजारका श्रद्धा श्रेष्ठ, कुँडहरका बर्षा श्रेष्ठ, चिप्लेढुङ्गाका प्राथर्ना डङ्गोल, दुलेगौंडाका आकृति श्रेष्ठ ,हेम्जाका कृपा श्रेष्ठ, लेखनाथ शिसुवाका सुष्मी कतिला, तेर्सापट्टीका श्रीया श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेवा खल कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखेले नेवारी भाषा संस्कार र संस्कृति जगेर्ना तथा युवा पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउदै मिस नेवाका सहभागीहरुले समेत नेवारी संस्कारको जगेर्नाका लागि बिभिन्न कार्यक्रम गरि टेवा पुर्याएकोमा धन्यबाद दिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, कार्यक्रम संयोजक शम्भुलाल श्रेष्ठ, प्रमुख निर्णायक कृष्णमोहन श्रेष्ठ, मिस नेवा पोखरा ११३६ एलिशा जोशी लगायतले बोलेका थिए । प्रतियोगिताको निर्णायकहरुमा कृष्णमोहन श्रेष्ठ, शान्ती उदास, निरन्जन श्रेष्ठ, रत्नकाजी महर्जन, राजभाई जःकमी र आरती श्रेष्ठ रहेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन सारा बजिमय र तारा श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा कुमारी नाच, चर्या नाच, धिमे बाजा तथा नेवारी नृत्यहरु समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमबाट वचत रकम, नेवा खलः कास्कीले आयोजना गर्ने नेवारी साँस्कृतिक कार्यक्रममा टेवा पुर्याउने तथा भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ ।